Nageenyi humna waraanaatiin dhufu umrii hinqabu
Biyya sabaafi sablammootaa garaa garaa kan taate Itoophiyaan seenaashee keessatti wantoota adda addaa keessummeessiteeti.
Biyyattiin waggoota kurnan lamaan darban keessatti garuu rakkoolee hiyyummaafi boodatti hafummaa keessaa baatee daandii guddinaa qabatee socho'aa jirti. Guddinni kun akkuma itti fufetti osoo jiru garuu, sababoota garaa garaatiin komiin mootummaafi ummata giddutti erga uumamee waggoota lama laakkofsiiseera. Komiin kun mootummaafi ummata giddutti qofaa osoo hin taane, ummataafi ummata gidduttis haaloo (gadoo) uumuu danda'eera.
Jiruufi jireenya ykn walitti dhufeenya kamiyyuu keessatti walitti bu'iinsi kan jiraatu ta'uun waan nama mamsiisu miti. Rakkoo guddaan walitti bu'iinsa osoo hin taane, haala walitti bu'iinsichi ittiin keessummeeffamuudha.
Qaamni gaaffii ykn mufii qaama biraa irraa qabu tokko yemmuu gaaffiisaa dhiheessutti bifa aariin guuttameen ta'us, qaamni gaaffiin dhihaatuuf immoo bifa tasgabbaa'eefi haalaa walitti bu'iinsa uumame qabbaneessuufi furmaata kennuu danda'uun ta'utu isarraa eeggama.
Bara darbe walitti bu'iinsa kutaalee biyyattii keessattuu, naannolee Amaaraafi Oromiyaatti uumamee tureen lubbuun namoota hedduu kan darbe yemmuu ta'u, qabeenyi mootummaafi ummataa hedduunis barbadaa'eera.
Nageenyi biyyattii keessatti mirkanaa'ee tures sababoota kanneeniin kan boora'e yemmuu ta'u, kanarraa ka'uun mootummaan labsii yeroo hatattamaa akka labsuuf dirqamsiiseera. Erga labsichi hojirra ooleen booda hamma tokko nageenyi iddoo duriitti waan deebi'e fakkaatus, erga labsichi ka'ee booda rakkoon nageenyaa ammas haalli itti uumamaa jiru ni mul'ata.
Bakka mufiifi rakkoon ummataa hundeedhaan deebii gahaa hin argannettis gaaffiin ummataa kun waan dhaabbatu hin fakkaatu. Yeroo tokko laafaa yeroo kaan immoo cimaa itti fufuunsaa waan hin oolleedha.
Ji'a Fulbaanaa gara dhumaa irraa eegalee jechuunis erga labsiin yeroo ariifachiisaa ka'een ji'oota tokkofi lamaan booda gaaffiin ummataa bifa garaa garaatiin eegale. Keessattuu inni baranaa magaalotaafi baadiyyaa Oromiyaa heddu kan dhuunfate ture. Gaaffiin guddaan asitti ka'uu qabu garuu, mufiifi komii ummataa kanaaf furmaatni barbaachisu maal akka ta'erratti walii galuudha.
Akkuma isa darbee ammas labsii yeroo ariifachiisaafi komaandipoostiidhaan kan yaalamu taanaan badii biroo waan uumu fakkaata. Sababnisaas, ummata humna waraanaatiin sodaachisanii bulchuun furmaata dhumaa ta'uu waan hin dandeenyeefi.
Torbaan lamaan kana keessatti dhaabbilee barnootaa tokko tokko keessattis haalli jiru hedduu kan nama yaaddessuu ta'uusaatiin barattootni baayeen baruumsa adda kutanii gara maatiisaaniitti deebi'aa jiraachuusaanii himamaa jira.
Barattoota gidduttis sabaan wal qoodanii akka walitti bu'aniif qaamotni tokko tokko hojjachaa jiraachuunis kanumaan wal qabatee odeeffamaa kan jiru yemmuu ta'u, dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti haalli akkanaa uumamuunsaa immoo mootummaa biyya bulchaa jiruuf qaanii guddaadha.
Komii ummataafi mootummaa giddutti uumame furuun ga'eefi dirqama lammiilee biyyattii qofa ta'ee osoo jiru immoo qaamotni alaa dantaa ofii barbaadan giduu galuudhaaf sochiin taasisan bifa kamiinuu fudhatama kan hin qabneedha.
Waan qabatamaan komii ummataa ta'e tokko kallattiisaa jallisuudhaaf akka waan humnootni alaa uumaniitti odeessuunis waan yeroon irra darbe ta'aa jira. Dhugaan lafa jiru ummata biratti ni beekkama waan ta'eef. Haala kanaanis yeroo heddu yaalamee bu'aan dhufe taajjabbii ummataa qofa waan ta'eefi.
Walumaa galatti, rakkooleen asiifi achitti haala jijjiirataa iddoowwan tokko tokkotti uumamaa jiran furmaata haqa qabeessaa argachuu baannaan garri itti imalaa jirru hamaa natti fakkaata.
Torban kana/This_Week 17491
Guyyaa mara/All_Days 1442271